Beeraha lagu xanaaneeyo Xayawaanada oo laga dareemay cidlada dadka ku xanniban Guryahooda. - Awdinle Online
Beeraha lagu xanaaneeyo Xayawaanada oo laga dareemay cidlada dadka ku xanniban Guryahooda.
Qiimeyn lagu sameeyay Tiro kamid ah Beeraha lagu xanaaneeyo Xayawaanada caalamka ayaa lagu ogaaday in duur-joogta ay dareemeen cidlo kaga timid dadkii u dalxiis tagi jiray si ay u daawadaan.
Waxaa la xiray dhammaan goobaha lagu xanaaneeyo duur-joogta, si cudurka Coronavirus aan ugu faafin, waxaana ku kali noqday shaqaalaha gacanta ku haya xawayaanada beerta ku sugan.
Goobaha ugu badan ee lagu xanaaneeyo waxaa kamid ah beerta Phoenix oo ku taalla Arizona Mareykanka, waxaana ku sugan xayawaano badan sida Maroodiga, Daanyeerka iyo kuwo kale oo dadka ay jecel yihiin in ay daawadaan.
Dublin Zoo waa mid kamid ah Xarumaha Jamhuuriyadda Ireland ee loo dalxiis tago, waxaana farxad la’aan laga soo wariyay Duur-joogta halkaas lagu dhaqo, kadib markii ay waayeen dadkii u dalxiis tagi jiray.
Leo Ostrogel, Madaxa Xarunta Dublin Zoo ee dalka Ireland waxaana uu sheegay in Xayawaanada beerta ku jira ay muujinayaan calaamado Murugo, waxa uu rajeeyay in laga gudbo xaaladda sababtay in dadka ay ku nagaadaan guryahooda.
Inta badan Dalxiisayaasha caalamka ayaa ka kala tago wadamo kala duwan, si ay u hawo badashaan, dhaqaale badan ayaa kasoo gala Dowladaha leh goobaha ugu wanaagsan oo ay jecel yihiin dadka.
Isha: BBC / Awdinle Online
Previous articleMaamulka G/Banaadir & Gaadiidleyda Muqdisho oo Go’aano soo saaray
Next articleShaqaalaha Falastiin oo Israel si kumeel gaar ah ugu ogolaatay in ay ka shaqaystaan dhulka ay Maamusho.